सुन्दै अचम्म लाग्दाे ! एउटै आलु-को मुल्य १२ करोड पर्ने !!! – Wow Sansar
सुन्दै अचम्म लाग्दाे ! एउटै आलु-को मुल्य १२ करोड पर्ने !!!
January 8, 2021 76
सुन्दै अचम्म लाग्दाे ! एउटै आलु-को मुल्य १२ करोड पर्ने ! एजेन्सी // एउटा आलुको मुल्य १२ करोड भन्ने सुन्दा पनि पत्याउनै नसकीने तर एक आइरिस सेलिब्रेटी फोटोग्राफ`रले आइरिस आलूको फोटो १२ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेका छन् ।।
केबिन एबोस`ले आफू`ले अर्गानिक आलू`को फोटो एक अज्ञात युरोपेली व्यवसायीलाई बिक्री गरेको पुष्टि गरेका हुन् । उक्त फोटो २०१० मा खिचिएको थियो । त्यसको पोर्टफोलियो सटिबन सपिलबर्ग, माइलक पेलिन, फेसबुकको शेरिल स्यान्डवर्ग तथा मलाला यसूफजईमा पनि समावेश छ । आलू`को प्रिन्टको तीन भर्सन रहे`को छ ।।
आलु`को एक भर्सन फोटोग्राफर`को निजी संग्रहमा राखिएको छ । अर्को फोटो भने उनले सर्भियाको एक म्यूजियममा दान गरेका छन् र तेस्रो अज्ञात व्यवसायी`लाई बिक्री गरेका छन् । कसैले आफ्नै घरबा`ट कलाकृति खरिद गरे`को यो पहिलो पटक नभए`को एबोश`ले बताएका छन् ।।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार`माध्याम`सँग उन`ले व्यापारी`सँगै बसेर दुई ग्लास वाइन पिएको पनि बताएका छन् । वाइन पिउँदाको समय`मै व्यापारी`ले आफ्नो पेन्टिङ मन पराए पछि पेन्टिङ बेचे`को अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार`माध्याम`लाई केबिन एबोस`ले बताएका हुन् ।।
याे पनि: खाली पेटमा मनतातो पानी पिउनुका यस्ता राेचक ८ फाइदा, जुन सबैलाई थाहाहुनु अति आवश्यक । जानकारिका लागि पढेर सबैले सेयर गर्नुहाेला ।
क) दिनहुँ बिहान मनतातो पानी पिउनाले शरीरमा रक्तसंचार सन्तुलित र नियमित हुन्छ । पानी पिउनाले एसिडिटीको समस्या पनि कम हुन्छ र पेट सफा हुन्छ । ख) तपाइँलाई भोक नलाग्ने समस्या छ भने एक गिलास मनतातो पानीमा एउटा कागतीको रस, मरिच र नुन हालेर पिउनुहोस् ।यसले तपाइँमा भोक जगाउँछ ।।
ग) बिहान खाली पेटमा मनतातो पानी पिउनाले कब्जियतबाट छुटकारा मिल्छ । पर्याप्त पानी पिउनाले जोर्नीको दुखाई पनि कम हुन्छ र हड्डी मजबुत बनाउन सहयोग गर्दछ । घ) रुघाखोकी लागेमा पर्याप्त मात्रामा मनतातो वा तातो पानी पिउनु आवश्यक हुन्छ । यसले शरीरमा आराम मिल्छ ।।
ङ) यदि छालामा चाउरीपना तथा दागधब्बा आएका छन् भने हरेक दिन बिहान खाली पेटमा मनतातो पानी पिउनुहोस् । चियाकफीको साटो ग्रीन टी पिउनुहोस् । यसले छाला चम्किलो बनाउने र शरीरको तौल कम गर्न पनि मद्दत गर्छ ।
च) बिहान खाली पेटमा मनतातो पानीमा कागतीको रस राखेर पिउनाले शरीरका विषाक्त पदार्थ बाहिर निस्कन्छन् र शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमता पनि बढ्दछ । छ) यदि तपाइँलाई निकै थकाइ लाग्ने समस्या छ भने बिहान मनतातो पानी पिउने बानी गर्नाले मांशपेशीलाई तन्दुरुस्त बनाउन मद्दत गर्दछ ।
ज) बिहान उठ्नेवित्तिकै मनतातो पानी पिउनाले टाउको दुख्ने समस्याबाट छुटकारा पाउन मद्दत मिल्नुका साथै यसले श्वासको दुर्गन्ध र अन्य व्याक्टेरियाको संक्रमण हुनबाट बचाउँछ ।
Prevविबाहपछि झनै मालामाल श्वेता, छिन् निकै खुशी, किनिन् १ करोडको गाडी हेर्नुहोस् भिडियो
Nextएउटै मण्डपमा दुई प्रेमिकासंग चन्दुले गरे धुमधामसंग विवाह, गाउँले अचम्म
रिहनलाई यस्तो अवस्थामा पुर्याउने ग्राण्डी अस्पताल विरुद्ध अदालतले दियो यस्तो आदेश